Sunday 5th of December 2021 / 08:33:17 PM
यो कथाको शिर्षक के हुनसक्छ ?
अनलाइन दर्पण 2018-01-28
चिसो मौसममा एका बिहानै सडक किनारामा अन्डा बेच्न बसिरहेका एक गरिब वृद्धमाथी मेरो नजर पर्यो, उनी बिरामि जस्तो देखिन्थे त्यतिकैमा एकजना मेडम आफ्नो कारबाट ओर्लेर ती वृद्ध अन्डा बिक्रेतालाई सोधिन
- तपाइले अन्डा कसरी बेच्नु भयको छ ?
कसैको विश्वास अनि कसैसँग सम्बन्ध जोडिन्छन् यहाँ
आफ्नै छोराबाट बाबुआमाको मन तोडिन्छन् यहाँ ।
बिर्सन्छन् बचपनमा त्यहि आमाको सारिको फेर समाउँदै हिडेको
जब ठुला हुन्छन् अनि बाबुआमाको साथ छोडिन्छन् यहाँ ।
अनलाइन दर्पण 2018-01-13
तिमी सफलताको शिखर चुमौला कुनै दिन
म जग अनि तिमी घरको खर चुमौला कुनै दिन
प्रेमको अग्नि परिक्छ्या लिन आउँलान् जो कोहि
म फेल अनि तिमी दरबन्दीको करार चुमौला कुनै दिन
होला साचो प्रेम अधुरो नै हो
यौनप्यास मेटाउन आएको त्यो युवा मेराे स्तन पिएर फर्कियो
अनलाइन दर्पण 2017-12-30
एक पटक एउटा अनौंठो घटना भयो । सायद कोठीहरुमा अपवादका रुपमा हुने घटना । एकपटक हाम्रो बंगलामा मोजमस्तीका लागि कलेजका केही केटाहरु आएका थिए । ती केटाहरु आ आफुले मन पराएका केटीहरु बोकेर कोठामा गए । ती मध्येकै एउटा केटाले मलाई राज्यो र मेरो कोठामा आयो
पेटभित्रको बच्चीको मार्मिक आत्मकथा….यो पढेपछि सबैकाे मन रुन्छ
५२ बर्षमा प्रवेश गरे बलिउड सुपरस्टार सलमान, किन गरे बर्थ डे पार्टीमा मिडियालाई निषेध
अनलाइन दर्पण 2017-12-27
बलिउडका सुपरस्टार नायक सलमान खान आजदेखि ५२ वर्षमा प्रवेश गरेका छन् ।खानले यसपालि आफ्नै फार्म हाउस् पनवेल फार्म हाउसमा वर्थ डे सेलिव्रेट गरिरहेका छन् ।
उनले बर्थ डे पार्टीका बारेमा मिडियालाई प्रवेश नदिने योजना बनाएका छन् । यस कार्यक
दाेश्राे बिहे गर्न लाग्दा भुपु श्रीमानले मण्डपमै अाएर यस्ताे पत्र दिएपछी....
एक सुन्दर जोडि थिए ! केटा र केटि धेरै बर्ष माया प्रेम बसे पछि विवाह गर्छन , विवाह पछि त झन माया प्रेम पनि धेरै बड्दै जान्छ,दुबै जना धेरै नै खुशि र एक सुखि परिवारका साथ रमाउदै जिवन निर्वाह गरिरहेका हुन्छन। बिहान बेलुका श्रीमती पुजा पाठ गरेर सध
शास्त्रीय संगीतकी विद्यार्थी सिर्जु अधिकारी आफूलाई नेपाली गीतसंगीतका क्षेत्रमा पृथक् पहिचान बनाउँदै छिन् । सांगीतिक क्षेत्रमा सबै किसिमको प्रस्तुति दिएर कलिलो उमेरमै उनले आफूलाई पृथक् पहिचान दिलाउन सक्षम भएकी छन् ।
दाङको तुलसीपुरमा जन्मि
छिनछिनमा फेसबुक खोल्
दयाहाङकाे पारिश्रमिक चुलियो
औसत १० लाख रूपियाँमा फिल्म खेल्ने गरेका दयाहाङ रार्इकाे पारिश्रमिक भैरे चलचित्र बाट एकाएक चुलिएकाे छ । फिल्मको कन्टेन्ट भन्दा कलाकारको पारिश्रमिकको बढी चर्चा हुने जमाना छ ।
भैरेमा लिएको पारिश्रमिकको विषयमा दयाहाङ
लघुकथा १ः कमाल -(क को प्रयोग)
कालो कादम्बिनी कड्कँदै । काग कावाकासाथ का का कराउँदै । कोइलीको कुहु कुहु कणर््ाप्रिय । केटाकेटी कवाजमा कुदाकुद । कठ्याङ्ग्रीएको कानकुच्चे काँइला कोठाको कार्पेटमा कुक्रुक्क । काइली काइलासँगै कार्पेटमा
यी हुन् दशैंमा बज्ने उत्कृष्ट गीतहरू (भिडियाे सहित)
अनलाइन दर्पण 2017-09-24
हिन्दुहरूकाे महान पर्व दशैं र तिहार नजिकिदै गर्दा रेडियो तथा टिभीमा मंगलधुन बज्ने गर्दछ । त्यसैगरी दसैं र तिहार सम्बन्धि विभिन्न खालका गीतहरु हामीले कयौं वर्षदेखि सुन्दै आएका छाैं । दशैंमा बज्ने यस्ता गीतहरूले&nb
हजारौं स्पर्मको म्याराथन जितेर
सुरु भएको हो
तिम्रो बहादुरीको यात्रा !
तिम्रै नामको लालपुर्जाले मात्रै
मेरो पाठेघरको उचाई !
संस्कारका भुत्ते कानहरु
नेपाल आइडल विवाद बारे अदालतकाे यस्ताे अादेश
अनलाइन दर्पण 2017-09-06
काठमाडौं, २१ भदौ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पर्सिसम्म नेपाल आइडललार्इ अल्पकालिन अन्तरिम आदेश सँगै तिन दिन सम्म भोट गणना नगर्न अादेश दिएकाे छ ।
आइडलको १५ भदौको कार्यक्रममा चार प्रतिस्पर्धीले आफ्नो प्रस्तुती
अनलाइन दर्पण 2017-09-05
काठमाडौं, १६ भदौ । एपीवान टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’ को मञ्चमा चर्चित गायक राजेशपायल राईकाे उपस्थिति भव्य रह्याे । राइले अाफ्नाे चर्चित गित 'तिमिलार्इ राेजे' बाेलकाे गित गाउदै नेपाल अाइडलकाे साे अाेपनि
एक तोला होइन दश तोला सुन किन्नु बुढी ।
पाँच लाखको होइन पचास लाखको घर किन्नु दाजु ।
बिदेशमा छु म ।
मैले केही खानु लाउनु पर्दैन ।
जति पनि पैसाको माग गरे हुन्छ
मैले तलब पाउनलाई महिना मर्नु पर्दैन ।
‘छक्का पन्जा २’ को गितमा तक्मे बुढाले प्रियंकालार्इ ‘झ्याम्म झ्याम्म’
नेपाली सिनेमा जगतमा कुनै चलचित्र सफल भएकाे खण्डमा नया नामकाे सट्टा साेही नाम मा २ थपेर नया चलचित्र निर्माण गर्ने गरेकाे पाइन्छ ।
यस्तै दिपक राज गिरीकाे लगानीमा निर्मित चलचित्र 'छक्का पन्जा' सफल सावित भए सँगै नामकाे पछा
अशोक कुँवर ‘नेत्र’काे कविता: आइसी नम्बर आठ सय दस
म आइसी नम्बर आठ सय दस
या भन्न सक्नु हुन्छ कन्ट्रोलित यन्त्र
मेरो यहाँ उपस्थितिको अर्थ यही छ कि
मैले चार चार वाटका
दुइटा स्पिकर बजाउनु छ ।
अनलाइन दर्पण 2017-08-25
बिति सक्यो समय,
भनिएको १०१ काम
सिमित हुँदैछ नाममा
लाम उस्तै छ कर तिर्न
दाम बढेको छ कर लिन
आफैँ उदाउने घाम
जनताको लागि सधैँ
धुलो हिलो खाल्डो र जाम